K: Mogok Blues
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်က .. မိုးကုတ်မြို့လေးကို ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။ တကြိမ် ထက်မက.. ၂ ကြိမ် ၂ခါ ၂နှစ်ဆက် ပီး ရောက်ခဲ့ဘူးတာ ။ ရောက်ယုံတင် ဘယ်က မလဲ....။ မိုးကုတ်မြို့ကြီးကို ၀န်းရံထားတဲ့ အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ လက်ညိုးတောင်ကြီးပေါ် ကနေ ..ဟောဒီလို မိုးကုတ်မြေကို စီးမိုး ကြည့် ခဲ့ဘူးတာ။
ကိုယ်တို့ ကျောင်းသားတွေ တည်းတဲ့ ချမ်းသာကြီး ဘုရား ဇရပ် နဲ့ကပ်လျက် တိုက်က အန်တီ ကတောင်.. `အေး...ခု နောက်ပိုင်း စီးပွားရေး လုပ်လို့ မကောင်းတော့ဘူး..ဟေး..´ လို့ ၀ဲတဲတဲ နဲ့ ညည်းရှာတယ်။ သဘော အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အန်တီ တို့ လင်မယားက ကျောင်းသား တွေ ကို အစစအရာရာ ကူညီ.. သူတို့ တိုက်ထဲကိုလည်း ၀င်စေ ထွက်စေ ပဲ။ လှပ ခေတ်မှီ တဲ့ တိုက် နဲ့ ဘုရားစင် ဧည့်ခန်းတွေမှာ အလှဆင် ထားတဲ့ နီလာ အရိုင်းတုံး ပတ္တမြား အရိုင်းတုံးကြီးတွေ ကို ငေးရင်း .. သူတို့ရဲ့ တဦးတည်းသော သား မန္တလေး တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်း က မိုးကုတ်မှာ အလုပ် လုပ်မကောင်းတော့ လို့ မှိုင်းရှုးမှာ တွင်းသွားတူး နေတယ် ဆိုတော့.. ကိုယ်တွေ အတွက် တော့ အထူး အဆန်း တွေချည်း။
ကျောင်းသားတွေ ရေချိူး ရေ ခပ် အစစ အရာရာ ဒိုင်ခံ အကူညီ ပေးတဲ့ ဇရပ် ရှေ့အိမ် က လေးလေးတူး တို့ မိသားစု လေး ဆို တကယ့် မိုးကုတ်သား တွေ ရဲ့ စရိုက် နဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ အတိုင်း ပဲ။ လေးလေးတူး ရော သူ့ညီ .. လေးလေး ဇော် ရော အသက် ၅၀ ကျော် လူပျိူ ကြီးတွေ။ မကျန်းမာ တဲ့ အမေအို ကြီးကို ပြုစု ရင်း မိရိုးဖလာ ကျောက် ထု ပန်းပု လုပ်ငန်း ကို လုပ်ကြတာ။ သူတို့ လက်ရာ တွေက အမေရိကန် နဲ့ ဥရောပ ဈေးကွက် ထိတောင် ပို့ရောင်း ရတယ် ဆိုပဲ။ ပြည်ပ ရောက် ဗမာ ကုန်သည် တချိူ့ လာ လာယူတယ်ပြော တာပဲ။ ညဖက် ဆို ကိုယ်တို့ ကျောင်းသား တသိုက် လေးလေးတူးတို့ မီးဖိုချောင် ထဲမှာ ဖယောင်း တိုင်လေး တွေ ထွန်းပီး ဘီဘီစီ တို့ ဗီအိုအေ တို့ နားထောင်ကြ နိုင်ငံရေးတွေ ပြောကြပေါ့ ။ တလ ကြီးတောင် နေရ တာဆိုတော့ ပြည်မက သတင်း တွေကို အဆက် အသွယ် မပြတ် ချင်ဘူးလေ။ ထူးထူး ခြား ခြား မီး လွှတ် တဲ့ နေ့တွေဆို တီဗီလေး ဘာလေး ခဏ တဖြုတ်ကြည့် ကြ။ အရမ်း ခင်စရာကောင်း တဲ့ မိသားစု တွေပါ။ ( မိုးကုတ်မှာ အဲဒီ အချိန်ထိ ပြည်မကလို တရားဝင် လျှပ်စစ် ဓါတ်အား ပေး လိုင်း တွေ မရှိပါ) တခါတော့ လေးလေးတူးက သူ့ အတွေ့အကြုံ တခု ကိုပြောပြတယ်။ မိုးကုတ် မြို့ပြင် တနေရာ မှာ အဖိုး မဖြတ် နိုင်တဲ့ နီလာကြီး တတုံးကို သူကောက်ရ ခဲ့ဘူးတယ်တဲ့။ အရိုင်းတုံး ကို ရ တာမဟုတ်ဘူး နော်။ တကယ့် အပြည့် အစုံ အကွက်ဖော် သွေးပီးသား သိန်းထောင်ပေါင်းများစွာ တန်နိုင်မဲ့ ကျောက်ကြီးတဲ့။ အဲဒါ နဲ့ သူ့မှာ တပတ်လောက် ချိတုံ ချတုံ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေပီး နောက်ဆုံး တော့ ပိုင်ရှင် ကို ပြန်ပေး လိုက်နိင်တယ်တဲ့။ ကိုယ် တို့ တသိုက်က အော်တာပေါ့။ `ဟာ..လေးတူးက ဘာလို့ ပြန်ပေးလိုက်တာ လဲ..´ ဘာပဲ... ညာပဲ ပေါ့။ လေးလေးတူးက ပြုံးပြုံးကြီး နဲ့ ပြောတယ်။ ` အယ်..ငါလဲ လိုချင်တာပေါ့ ကွ..ဒါမင့် ပိုင်ရှင် နေရာ ကတွေးလိုက် တော့ သူ့ခမျာ အတော် နှမြော ရှာ မယ် ဆိုပီး ..မရ ရ အောင် စုံစမ်းပီး လိုက်ပေး လိုက်တာ..´တဲ့။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ တွေရဲ့ စီးပွားရေး တွေ နေ့စဉ် ဘ၀ တွေ ဟာ.. ၁၉၆၂ ခု နှစ် နောက်ပိုင်းက စလို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲ လာလိုက်တာ... ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်း နှစ်တွေဟာ အသိသာဆုံးပဲလို့ ပြောပြကြတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပြည်သူ ပိုင်တွေသိမ်း တော့ တအိမ်တက်ဆင်း လိုက်ရှာ ခံရတာ ဆိုပဲ။ ခုနောက်ပိုင်း ဦးပိုင် လိမိတက် ဆိုတာ ကြီး မိုးကုတ်ကို ရောက် လာ တော့ အခြေ အနေ တွေ ပိုကျပ်တည်း လာတယ် တဲ့။ ကိုယ် တို့ ကျောင်းသားတွေ လေ့လာရတဲ့ နံမည် ကြီး ကျောက် အထွက် ဆုံး တွင်း ကြီး တွေ ဆိုလဲ ဦးပိုင် က ပိုင် တာတွေချည်း ပဲ။ အရင်သတ္တု တွင်း ၀န်ကြီးဌါန လက်အောက်က မြန်မာ့ ကျောက်မျက် ကော်ပိုရေးရှင်း ဆိုတဲ့ ဌါန လည်း အသာ ချောင်ကပ်ပီး မီးစင် ကြည့်က နေတာ ကို မြင်ခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းသားတွေ က..` ဟာ ဦး ပိုင် ဆိုတဲ့ အဘိုးကြီး တော့ ..တော်တော်ချမ်းသာ မှာပဲနော်..´ လို့ နောက်ပြောင် ပြော ကြပေမဲ့ ... အဲဒီ ဟာသ က.. မိုးကုတ် မြို့သား တွေ အတွက် တော့ လုံးဝ ရီစရာ မကောင်းခဲ့ ဘူး။
ကိုယ်တို့ လေ့လာ ရတဲ့ အကြီး ဆုံး တွင်းကြီး ဆို... တနေ့ ကို ရတနာမျိုးစုံ ကရက်ချိန် ၂၅၀ လောက် တောင် ထွက်တာတဲ့။ အဲဒါ တနေ့ထဲ တင်နော်။ ကံကောင်းတော့ ကျောင်းသားတွေ ကို အထူးအခွင့် အရေးအ နေ နဲ့ အဲဒီ တွင်း ကြီး ကနေ ရတနာ တွေ အဆင့် ဆင့် ထုတ်လုပ် ပုံ ဈေးကွက် ပို့ပုံ တွေ ကို လေ့လာခဲ့ ရတယ်။ သူ တို့ ရဲ့ အကျိုးတူ အစုစပ် လုပ်ကိုင်ပုံ တွေ ကိုလည်း မျက်စိလည် ခမန်း သိခဲ့ရတယ်။ သဘော ကတော့ ဒေသ တခု လုံး က အထွက်ကောင်း တဲ့ နေရာ မှန်သမျှကို ဦးပိုင် က ဘာအကြောင်းပြချက်မှ ပေးစရာ မလိုပဲ သိမ်းလိုက်တယ်။ ပီးမှ အကွက် တွေ ပြန်ခွဲ ရိုက်ပီး ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင် တွေ ကို လေလံ ပြန်ဆွဲတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အပြတ် ပေးဆွဲ လိုက်တာ လည်း မဟုတ်ပြန်။ အဲဒီ လုပ်ငန်း ရှင် က ငွေ အား လုပ်အား စိုက် တူးပေရော့။ ကြိုက်သလောက်တူး ။ တတောင် လုံးပြိုချင် ပြိုသွားပစေ။ ပီးရင်သာ ထွက်လာ တဲ့ အထဲက ဦးပိုင် ကို ရာခိုင်နှုံး နဲ့ ပြန် ခွဲပေး။ နံမယ်နဲ့ လိုက်အောင်ကို ပိုင်ပါပေတယ်။ ဘာ မှ ကို လုပ်စရာ မလိုဘူး။ အချိန် တန် လိုက်သိမ်းယုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ စီမံ ခန့်ခွဲ ဖို့ နဲ့ ..လုပ်ငန်းရှင် တွေ လူလည် မကျ နိုင်ေ အာင် ကြီးကြပ် ဖို့ ကိုတော့ ရိုးရိုး စစ် သည်က စလို့ တပ်ကြပ်..ဗိုလ်မှူး အထိ အဆင့် ဆင့် တာဝန် တော့ ယူရတာပေါ့။
လူတွေ ..လူ တွေ..။ ဆူ ညံလို့...။ တန်း စီလို့..။ တွတ်တိုးလို့... ။ သနပ်ခါး အ ဖွေးသား နဲ့ ကလေး တွေ..မိန်း မတွေ..ကောင်လေး တွေ .. အရွယ်စုံ.. အရောင်စုံ။ အဲဒီ ရေ နီတွေ ထဲ မှာများ အထဲ က တရုတ် ကြီး မိသားစု တွေ အထပ်ထပ် ဇကာ ချ တဲ့ ကြား ထဲက..ကံကောင်း ထောက်မ.. အပေါက် ချော် ပီး ရေ နဲ့ မျော ပါလာ မဲ့ ကျောက် သေး သေး လေး တွေကို .. စိတ် ရှည် လက် ရှည် စောင့်ပီး ကျင် ယူ နေကြ တာလေ။ အမယ် .. သူ ဟာ နဲ့ သူ တော့ အလုပ် ကို ဖြစ် လို့။ ကလေး လေး တယောက် ဆို ..သွား မေးကြည့်တော့. တနေ့ကို ပျှမ်း မျှ အိမ် ဟင်းဖိုး တော့ ရတယ် တဲ့။
နေ့ လည် ၃ နာ ရီလောက် ကျ.. တခါ.. မြို့ထဲ က ..ဦးပိုင် ရုံးကို သွား ကြည့်ခွင့် ရ ပြန်တယ်။ နေ့ တိုင်း နေ့တိုင်း နေ့လည် ၂ နာ ရီ လောက်ဆို တမြို့ လုံးက လုပ်ကွက် တွေက ရသမျှ ကျောက် တွေ ကို သေချာ .. ချိတ်ပိတ် ထုပ် ပိုး ပီး စစ်ကား အစောင့် အရှောက် နဲ့ ..ခု ဦးပိုင် ရုံး ကို လာ ပို့ ကြ ရ တယ် တဲ့။ ကိုယ် တို့ အဖွဲ့ တွေ ရောက်သွားတော့ .. လုံလုံ ခြုံ ခြုံ အခန်း တခု ရဲ့ အလယ်.. စားပွဲ အကြီး ကြီး တခု ပေါ် မှာ ..အထုပ် တွေ..အထုပ်တွေ...။ မိုးကုတ် မြို့ က ထွက် တဲ့ တနေ့စာ ရတနာ တွေလေ။ အဲဒီ စားပွဲ ကြီး ကို ၀ိုင်း ထိုင် နေတဲ့ လူ ကြီး လေး ငါး ခြောက် ယောက် က.. စာ ရွက် ကြီး တရွက် ပေါ် မှာ မှတ် တဲ့သူ က မှတ်။ တချို့ အထုပ် တွေကို ဖြည် တဲ့ သူ က ဖြည်ပေါ့။ လုပ်ကွက် တခု ချင်းက လာ တဲ့ ကျောက်တွေကို စာရင်း ဇယားနဲ့ အရေ အတွက် ကိုက် မကိုက် စစ်ဆေး ကြ တယ် ထင်တာပဲ။ ဘေး က ..လိုက်ရှင်း ပြတဲ့ လူ ကြီး ကပြော တာတော့.. အဲဒီ အဖွဲ့မှာ ..မြို့မိမြို့ဖ ထဲက တချို့ရယ်.. မြန်မာ့ ကျောက်မျက် ကော်ပိုရေး ရှင်း က ..တာဝန် ရှိသူ ရယ်... ဦးပိုင် က တာဝန် ကျ ဗိုလ်မှုးရယ် ..ရာဖြတ် တချို့ ရယ် ..အဲလို..အဲလို.. ဖွဲ့ ပီး စစ်ဆေး လက်ခံ တာလို့ ရှင်းပြတယ်။ ကိုယ် တို့ တွေက တော့ ခပ်လှမ်း လှမ်း ကပဲ..ကဲ ကြည့်ရတာပါ။ ပီး တော့မှ.. အား လုံး ရဲ့ ရှေ့မှာ အာမခံ သေတ္တာ ထဲ ထည့်.. တပတ် တခါ ဆိုလား.. ချာတာ လေ ယဉ်နဲ့ ရန်ကုန် ကို တန်းပို့ ရ တာတဲ့။
ငယ်ငယ်တုံး က ပထ၀ီမှာ ဗမာပြည် မြေပုံ ဆွဲ ရတိုင်း.. ရှမ်းပြည်နယ် လိုင်း ကိုဆွဲ ရင်.. ဒီနေရာ လေး က ဘာလို့ အချိုင့် ခွက် လေး ဖြစ် နေပါလိမ့် လို့ တွေး ခဲ့ရတာ။ အော်.. မိုးကုတ် မြေရယ်.. မင်း ကို ဘယ်သူ ပိုင် လဲ တော့ မသိ.. ရွှေစွန် ညို တွေ လင်းတ တွေ က တော့ တ၀ဲ လည် လည်။ မင်း ရဲ့ ကိုယ် ခန္တာပေါ် မှာ လည်း ဒဏ်ရာ တွေက ပြည့် လို့.. အနာ အဟောင်းတွေ ကလည်း မကျက် နိုင်..။ အနာ အသစ် တွေကလည်း ဟော တခု ..ဟော တခု။ ဟောဒီ မှာ ကြည့် ပါဦး ... အနာ ပေါက် ကြီး တွေက ဟောင်းလောင်း ။
အခု လွတ်မြောက်နယ်မြေမှာရေးတဲ့ သိခဲ့ဘူး တဲ့ မိုးကုတ် မြို့ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးရှည်က ပတ္တမြားမြေဖြေးဖြေး ထက် ဖတ်လို့ပိုကောင်း။ ကျနော်လည်း မိုးကုတ်သားပါပဲ။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ လူတွေက အထင်ကြီးကြတယ်။ မိုးကုတ်သားများ မြန်မာပြည်အတွင်း ဘယ်ပဲရောက်ရောက် "ဟ - သူဌေးပဲ" လို့ အပြောခံရ အထင်ခံရ။
ကျော်လင်းထွတ်: ကျွှန်တော့မြို့လေးအကြောင်းကိုအပြည့်အစုံရေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...အတိုင်းမသိပါဘဲဗျာ..
clef: မကေရေ...မိုးကုတ်မြို့လေးကို သေသေချာချာ ခံစား သွားတယ်။
စိုးထက် - Soe Htet !: မကေရေ ... ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ အိုင်ဒီယာ မိုက်တယ် ... ဖြေးဖြေးနော် ... :P
Revising your article:
Lay Lay Zaw's the one who found the stone and returned it to the owner. He's the elder one and Lay Lay tu is the younger one. Their mother passed awayed in 1999.
The hall with the piano was renovated in 2001.
Thank you for your detail information (d120y)
I really appreciate all of your comments. :)
အဲ့ကိုကွင်းဆင်းတုန်းက အမတို့တွေ့ရှိတဲ့ ကျောက်အကြောင်းတွေလဲဖတ်ချင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ... တင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။
အဲ့နေရာတွေက တကယ်ပဲ အရေးပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေပီနော်။